Par Taratra sur 23/06/2016
Ankizy mianadahy 9 taona sy 7 taona no nisy nangalatra tany Ampasika Mahajanga, ny 20 jona lasa teo tokony ho tamin’ny 8 ora alina. Nisy olona niantso 119 tamin’ny 21 jona 2016 tamin’ny 1 ora tolakandro nanome vaovao momba io tranga io. Nidina tany an-toerana ny zandary ka tratra tao an-tranon’ny lehilahy iray, 65 taona, ireo zaza, ary ity farany efa voasambotry ny fokonolona ka natolony ny zandary. Notanana ao amin’ny zandary Mahajanga izay manao ny fanadihadiana ilay nahavanon-doza.
Notafihin’ny jiolahy ny tokantrano iray any Analambaliha Andapa, ny 17 jona lasa teo tokony ho tamin’ny 11 ora alina. Nofirain’izy ireo antsy ny saoka sy ny felatanan’ilay ragahy tompon-trano. Lasan’ny jiolahy ny basy calibre 16 marika Simplex N°318498 sy lavanila manta milanja 50 kg tao amin-drangahy. Ahina ho nahavanona ny fanafihana ny lehilahy iray izay zanak’io tompon-trano ihany. Mandeha ny fanadihadiana.
Fiara taxi-brousse Hyundai , zotra mampitohy an’i Vohémar sy Sambava, nandona zaza 8 taona, tany Andalamahitsy, ny 21 jona teo tamin’ny 4 ora hariva. Nitsoaka ilay mpamily ary rehefa tonga teo amin’ny barazin’ny zandary teo Anosiarina izy, nangataka toromarika tamin’ny zandary ary namonjy ny borigady Sambava avy eo. Maty tsy tra-drano ilay zaza voadona. Mandeha ny fanadihadiana.
Notafihin’ny dahalo miisa 40 nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika sy basim-borona ny tanànan’i Mahazoarivo Ambatofinandrahana, ny 21 jona lasa teo tamin’ny 5 ora maraina. Omby miisa 60 lasan’ny dahalo, ary trano miisa efatra may nodoroan’izy ireo. Olona iray ihany koa maty nandritra ny fanafihana. Nanao ny fanarahan-dia ny zandary avy any Mangataboahangy. Nanampy koa ny avy any Ambatofinandrahana.